သင်ယူ: အစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်စောစော porn အသုံးပြုမှု | ဖောင်ဒေးရှင်းကဆုချ
ပင်မစာမျက်နှာ သင်ယူ Porn & အစောပိုင်းလိင်ဆိုင်ရာပွဲ ဦး ထွက်
အစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်အစောပိုင်းညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းညစ်ညမ်းစားသုံးမှုမှာ antisocial အချက်များ၏ကျယ်ပြန့ဖြတ်ပြီးရှုပ်ထွေးရောနှောအတွက်တစ်ဦးတည်းသာအချက်တခုဖြစ်ပါသည်။
ကနေဒါသုတေသန မြီးကောင်ပေါက်ပေါ်နမူနာ၏ 98% ပထမဦးဆုံးထိတွေ့မှု၏ပျှမ်းမျှအသက် 12.2 နှစ်ပေါင်းဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူညစ်ညမ်းထိတွေ့ခဲ့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နီးပါးသုံးပုံတစ်ပုံ 10 များ၏အသက်အရွယ်အားဖြင့်ညစ်ညမ်းမြင်ဘူးများနှင့်ညစ်ညမ်းထိတွေ့ကြိုတင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမှပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အစပိုင်းတွင်လူငယ်အသက်9သို့မဟုတ်ကျော်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါအသက်အရွယ် 10 သို့မဟုတ်အငယ်မှာညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအားပေးတဲ့သူတွေကိုအကြားကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်နှောင့်ယှက်ခဲ့ကြသည်။ အငယ်အသက်အရွယ်အုပ်စုတစ်စုနမူနာပိုပြီးလိင်မေးခွန်းထုတ်စရာလုပ်ရပ်များပိုမိုမတူညီလိင်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဟာအလိုဆန္ဒစေ့စပ်တော်မူပြီးမှအစီရင်ခံပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနောက်ပိုင်းမှာအသက်တာ၌, အကြမ်းဖက်မှုမှညစ်ညမ်းမြင့်မားစားသုံးမှုနှိုးဆော်ခြင်းများနှင့်ညစ်ညမ်းမှာရှာဖွေနေအပတ်တိုင်းပိုပြီးအချိန်ဖြုန်း။
တစ်ဦး 2015 အတွက် ဆွီဒင်လေ့လာမှု (Kastbom) ကိုသုတေသီများ "စောင့်ကြည့်ညစ်ညမ်းစိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်သိသာထင်ရှားသောယိုယွင်းရှိခြင်း၏အလေးသာတိုးမြှင့်" ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ "အစောပိုင်းပွဲဦးထွက်အပြုသဘောထိုကဲ့သို့သောထိုကဲ့သို့သောအကြမ်းဖက်ဖြစ်ခြင်းသဘောကိုမုသာ, ခိုးယူခြင်းနှင့်အပြေးကဲ့သို့သောဆေးလိပ်သောက်, မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရက်သေစာသုံးစွဲခြင်းနှင့် antisocial အပြုအမူအဖြစ်မိတ်ဖက်, ပါးစပ်နှင့်စအိုလိင်ဆက်ဆံ၏အတွေ့အကြုံကို, ကျန်းမာရေးအပြုအမူတွေ, ၏နံပါတ်အဖြစ်အန္တရာယ်များအပြုအမူတွေ, ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည် အိမ်ကနေ။ အစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်နှင့်အတူမိန်းကလေးများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုသိသိသာသာပိုပြီးအတွေ့အကြုံရှိခဲ့သညျ။ အစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်နှင့်အတူယောက်ျားလေးများလိင်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု "ရောင်းအတူတကွလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုများစွာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူ, ကွက်တိဝင်, အနိမ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တန်ဖိုးထားသူနှင့်ဆင်းရဲသောသူတို့သည်စိတ်ကျန်းမာရေး၏အားနည်းအသိရှိသည်ဖို့ကပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်။
အခြား 2011 ကနေဆွီဒင်သုတေသန (Svedin) မကြာခဏညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်းတစ်ဦးထက်ပိုသောအပြုသဘောခဲ့ ပို. မကြာခဏညစ်ညမ်းကြည့်ရှု "ပေါ်တွင်လှည့်" နဲ့မကြာခဏညစ်ညမ်း၏အဆင့်မြင့်ပုံစံများကိုကြည့်ရှုအားပေးကြသည်ကဖော်ပြခဲ့သည်။ မကြာခဏအသုံးပြုခြင်းကိုလည်းအများအပြားပြဿနာအပြုအမူတွေနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ " ... ယောက်ျားလေးများအတွက်မကြာခဏအသုံးပြုသူများသည်အုပ်စုသည်အသက် 15 နှစ်ပေါင်းမတိုင်မီသိသိသာသာပိုပြီးမကြာခဏဖြစ်ဖို့သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်အစီရင်ခံနှင့်ပိုပြီးမကြာခဏရည်ညွှန်းအုပ်စုတစ်စုအတွက်ယောက်ျားလေးများထက်ပိုမိုမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ5ကြိမ်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ ဂျာမန်မြီးကောင်ပေါက်များ၏ 2012 လေ့လာမှု (Weber) မြင့်သောညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနဲ့အစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်အကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်ဆက်စပ်မှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကအများဆုံးမြီးကောင်ပေါက်အဘို့, ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ပုံဖော်ရိုက်ကူးမှု၏တစ်ခုတည်းသောလက်လှမ်းအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည် "အဲဒီမှတ်ချက်ချသည်။ ညစ်ညမ်းအရှင် "လိင်စိတ်နိုးထမှုအတွက်ဒါပေမယ့်လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးစားပေးလေ့လာစူးစမ်းဖို့မသာမြီးကောင်ပေါက်ကအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
In ထိုင်ဝမ် ပညာရေးဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အင်တာနက်ကို အသုံးပြု. 33% အားဖြင့်အလေးသာလျော့ကျသော်လည်းအွန်လိုင်းလူမှုကွန်ယက်ကို အသုံးပြု. နှင့်ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များ surfing အသီးသီး 53% နှင့် 55% အားဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်၏လေးသာမှုတိုးမြှင့်။
In စင္ကာပူႏုိင္ငံ ထူးဆန်းသောဆက်စပ်မှုစအို heterosex လိင်ဆက်ဆံမှုမြားတှငျပါဝငျခွငျးယောက်ျားလေးများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်တစ်သိသိသာသာနိမ့်အသက်အရွယ်ရှိသည်ဖြစ်ခဲ့သည်။
<< လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေ နားမလည် >>